Spell - intshisekelo isiko lapho alupholi amakhulu amaningi eminyaka. Othile okholwa ukungathi sína lesi senzo, abanye bezama bewitch womshado wakhe ngenxa isithakazelo. Nokho, ngasizathu simbe, kunenkolelo yokuthi siphonso - umsebenzi kwenzelwe nje isifazane. Lokhu akulona iqiniso. Futhi Psychology, nabathakathi, nabathakathi uvumile ukuthi ukupela - ukufakwa ekhethekile ngokwengqondo, nesebenzela ukuhlala hhayi nje endaweni eyodwa ofuna charm, kodwa futhi lowo okhipha lo mkhosi wokudlulela.
Can a guy bewitch intombazane? Yiqiniso, uma ukholelwa kuwo. Indlela charm intombazane? Zonke imicikilisho yokusebenzelana magic senziwa kuphela uma umuntu uqhuba kubo, ukholwa ngamandla abo.
Indlela charm intombazane? Impendulo elula - ukwenza. Unganikeza izimbali zakhe, uhlele izizinda novelistic, ukufakazela okwakhe yabo. Kodwa konke lokhu kuthatha isikhathi futhi ngokuzethemba.
Abanye abafana bakholelwa ukuthi Abazicasuli yini bona angabhekana ngayo i ubuhle engenakuphikiswa, ngakho-ke khetha ukuya ngemilingo noma umlumbi. Babamba imikhosi egujwayo, futhi kuye le nsizwa izoba ulandela imiyalelo kuphela wathola. Kodwa isinqumo ema isihlangane ukushaywa enjalo ukukhokhela hhayi wonke umuntu: eziningi enamahloni lokuveza ukuntula kwabo ngokuzethemba. Ngakho-ke, zama ukuthola impendulo yombuzo indlela bewitch Man.
Ngiyayithanda ukupela romantic phezu kwamanzi enqunywa ngokuthwasa kwenyanga. Ukuze wenze lokho, udinga ukuba ngoLwesihlanu, njalo inyanga ezikhulayo, uthele ingilazi yamanzi, yihambise ngakwesokunene, ikhava kwesokunxele bese uthi isifiso. Kufanele izwakale okuthile okunjengokuthi: "ULena Ivanova, uyangithanda, ngeke ukwazi ukuphila ngaphandle kwami. Sizokujabulela ndawonye. " Ngomqondo onabile, inkulumo ifomula ngamazwi obaluleke ngokukhethekile abuzange. Kubalulekile ukuthi ngoyebo lidlule isifiso okumele okuphindaphindiwe phezu inkomishi izikhathi 9. Ngemva kwalokho, lo ingilazi lufakwa windi livuliwe, lapho inyanga liyashisa. Ekuseni noma ntambama lapho amanzi efuna ukuphiwa ukudla ngamandla imisebe ezinqunywa ngokuthwasa kwenyanga, kufanele aphuze Owesifazane. Ungakwazi uthele amanzi esitsheni itiye noma ikhofi, isobho noma umane wakhonza ice.
intombazane enye Indlela charm? Yiqiniso, izithombe. Udinga ahlale kahle esihlalweni, etafuleni phambi kwakho ukubeka isithombe sakho ozithandayo kwesobunxele futhi ilungelo ukubeka amakhandlela, engcono, isonto. Vala amehlo akho futhi aletha nomfanekiso + walowo abafuna "prisushit". Lean phezu kwamanzi, uphinda izinkathi eziyisikhombisa: "Njengomntwana osebenza ikhandlela ivutha umlilo, + ngakho evutha nogqozi (igama). Passion ukusha (igama) kuyalivuthela, ningaphumi. Izandla kimi yokwelula izindebe ukuhleba igama lami, amehlo ami ekubona! Kuphela kimi. Imicabango, inkanuko, izifiso - bonke bukhomba kimi. Konke kwenziwe kimi. Ufuna u- (igama), umzimba wami ufuna u- (igama) uthando lwami, ufuna u- (igama) kwenhliziyo yami. Sizokujabulela ndawonye. Sizokwenza uvale. Sine nogqozi nothando ngabantu ababili ukwabelana. Ngakho-ke kuyoba (ukuphinda kathathu). " Zithi uma itulo asho ngokuqiniseka, wayezoqhamuka ngosuku olulandelayo.
Lapho abantu bengibuza ngendlela ukuze bewitch intombazane wena, mina batusa usebenzisa ukupela ku itiye iced. Kushisa it is Ningamcimi ezibalulekile ikakhulukazi ukoma, Owesifazane okungenazinkinga, ngesikhathi esifanayo sizobonisa ukuthi wena umpheki onekhono. Okokuqala udinga ukwenza itiye. izingxenye zalo yilezi: itiye eliluhlaza, amacembe of rose fresh, uju, ginger, lovage, Thyme, Mint, lemongrass. Amakhambi ukwenziwa uThandeka esemi ngezinyawo. Lapho uyodala intombazane enhle ne ingilazi isiphuzo obandayo, ngifuna ngqo emehlweni akhe, cabanga ngalokho okufunayo. Futhi bathi kuye ngokwakhe: "Ngaphandle kwami ningenze ezomile, siphile kanye ungithokozisile ngakho."
Kukhona yezinkonzo eziningi uthando ukupela. Kodwa ngifuna ukuxwayisa zonke isenzo esinjalo ingaba yingozi. Ngakho-ke, ukucabanga nendlela bewitch Man, cabanga ngalokhu. Okokuqala, amabika ningenzi njalo. Okwesibili, kuwufanele sikhumbule amazwi "kumelwe sithwale imiphumela labo abaye walawula." Ekugcineni, cabanga ngalokhu: Wena angathanda esizeni intombazane? Ufuna ukuba okungenazinkinga ngokumelene intando yakho? Kungase kukuzuzise ukuthola ezinye izindlela charm ubuhle? Ngokwesibonelo, ukuthinta nje ukuthandana naye?
Izindlela lokuguqulwa amandla yangaphakathi
Cross-tattoo. Kusho ukuthini futhi ngubani ofanele?
Clairvoyant Vera Lion: izibikezelo yakamuva mayelana Russia nezwe
Indlela yokuvimbela isifo periodontal
Fish nge ikhanda esobala has a iso eyingqayizivele uhlelo optical
Abadlali yochungechunge "Bheka, iphunga strawberry 'kanye biography yabo
Dzhenis Dikinson ebusheni bakhe. Kushintshe ini ukubukeka kwakhe futhi siyini isizathu salokhu
Waterpark e Marino - imini nobusuku